WARARKA SUUQA ARSENAL, LABA XIDIG AYAA QARKA U SARAAN | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Arsenal ayaa kaliya haysta maalmo kooban si ay u dhameystiraan dukaamaysigooda suuqa kala iibsiga ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsigu bishan Janaayo. Gunners ayaa lala xiriirinayaa dhowr ciyaartoy, iyadoo Mikel Arteta uu doonayo inuu xoojiyo kooxdiisa si ay ugu tartamaan boosaska Champions League taas oo ay weli rajo ka qabaan, arsenal ayaa isku deyeysa inay qaybta labaad ee xilli ciyaareedka ka kacaan booska hoose ee ay hada fadhiyaan.
Saxeexa daafaca reer Spain Pablo Mari ayaa u muuqda inuu kusii dhawaanayo dhameystir, iyadoo ciyaaryahanku uu haatan London joogo kuwan gudo jiro wadahadalada qaybtii ugu dambaysay iyo inuu dhameystiro tijaabada caafimaad. waana hubaal in lagu dhawaaqi doono saacadaha inagu soo aadan.
Si kastaba ha noqotee, difaacu ma ahan booska kaliya ee ay Arsenal ku dadaalyso inay xoojiyaan inta lagu jiro daaqaddan January, dhinaca weerar garabka Atletico Madrid Thomas Lemar ayaa sidoo kale u muuqda inuu bartilmaameed u yahay Gunners, waxaana wararku aad u hadal hayaan inuu dhawaan emarates stadium ka ciyaari doono,
Laacibka ayaa ka maqnaa tababarka kooxda Atletico shalayto (sabtidii) ka hor kulankooda La Liga ee ay la ciyaarayaan Leganes.
Kulanka Galabta Laga Ciyaari Doono Tartanka Rift Valley Cup?